DHAKA (Zvinyorwa makumi mapfumbamwe neshanu) - Wicker-muchengeti wemagamba Akbar Ali achazotungamira chikepe gumi nemana- gumi neshanu Chikwata cheBangladesh icho chakagadzirirwa kuenda kuSouth Africa kweye 2020 U19 Cricket World Cup.
Ali akatungamirirawo Bangladesh U19s mumugariro wavo wepamusha wekushandisirana neSri Lanka: Ivo vakatora vechidiki-mishanu mutambo wezuva rimwe chete nyika dzakateedzana 4-0, mushure mekunge mutambo wekutanga wasiyiwa pasina bhora rakakandwa. Iye ane makore gumi nemasere ekuzvarwa akasangana maviri hafu-mazana emakiromita, uyezve akati mashanu abatwa kumashure kwewigi mumutambo wechitatu.
Aive zvakare akanaka mushe muBangladesh yekushanya kweNew Zealand muna Gumiguru, achinyoresa maviri makumi matanhatu-ematanhatu zvikoro mumitambo mishanu. Bangladesh yakunda yevechidiki ODI mutsara 4-1, Ali paakapedza aine avhareji ye72,50.
Tawhid Hridoy, uyo akawanikwa makumi masere nemazana makumi masere neshanu, gumi nemaviri *, zana nemakumi masere nemapfumbamwe pakapedzisira kubuda mana kuBangles U19, akanzi mumiriri waAli. Ruoko rworudyi rwaive rwavo rwaitungamira rwunokwikwidza kuSri Lanka, vachiunganidza mazana mana emakumi mana nematanhatu nemakumi maviri neshanu. Akavhurwa VaTudid Hasan, uyo akahwina pamusoro peNew Zealand nemitambo makumi matatu neshanu mumitambo mishanu, anochengetedza nzvimbo yake parutivi.
Kuruboshwe-ruoko Seamer Shoriful Islam yakadanidzirwa kupinda mumhirizhonga inoenderana. Iye ane makore gumi nemasere ekuzvarwa ane 35 YODI scalps kuzita rake kubva munaNdira 2018 - zvakanyanya kune chero hutu hweBangistan munguva. Kurudyi-ruoko pacer Tanzim Hasan Sakib, anotungamira mareti avo ekutora-weta muna 2019, akaverengerwawo. Iye ane makore gumi nemasere-gumi nerimwe akadzoka mawikendi matanhatu mumitambo mitatu yakatarisana neSri Lanka.
Kurudyi-ruoko kuruboshwe-spinner Shamim Hossain uye kuruboshwe-ruoko or Orthodox Bowler Rakibul Hasan vakadanidzirwazve muchikwata. Ivo ndeBanglawi U19 yechipiri uye yechitatu inonyanya kutora wicker-vateki gore rino.
Bato reBangladesh U19 richapinda muNyika dzeNyika dze2020 vaine chivimbo, vachinge vakunda vatatu vavo Vakasvikawo iyo yekupedzisira yeU19 Asia Cup pakutanga kwegore rino, kwavakapotsa nepakati pakatarisana neIndia nekumhanya shanu.
Zvakanakisa zvinodzoka muBangladesh kuU19 Cricket World Cup yakauya muna 2016, pavakasvika semi-fainari mumamiriro ezvinhu epamba. Vakakunda mumakwikwi eapureti kaviri, vachikunda West Indies neAustralia muna1998 na2004.
Bangladesh iri muGroup C we2020 U19 Cricket World Cup, pamwe nePakistan, Zimbabwe neScotland. Vachatanga nhimbe yavo yekurwisa Zimbabwe musi wa 18 Ndira muPotchefstroom.
Chikwata cheBangladesh: Akbar Ali (c), Tawhid Hridoy, Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Prantik Nawrose Nabil, Mahmudul Hasan Joy, Shahadat Hossain, Shamim Hossain, Mohammad Mirttunjoy Chowdhury Nipun, Tanzim Hasan Sakib, Avishek Das, Shah Alom, Rakibul Hasan, Hasan Morad. — ICC